काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टीका संघीय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अग्रगमनको मुख्य बाधक भएको बताएका छन् । सोमबार साँझ एक ट्वीट गर्दै डा. भट्टराईले ओली प्रवृत्ति प्रतिगमन, कुशासन, अल्पविकासको मुख्य वाहक भएको बताएका हुन् ।
भट्टराईले देशको मुख्य मुद्दा व्यक्ति नभएर ओलीप्रवृत्ति रहेको भन्दै कुनै पनि वहानामा ओलीप्रवृत्तिलाई काँध थाप्ने गल्ती नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
भट्टराईले लेखेका छन्, ‘आज देशको मुख्य मुद्दा व्यक्ति ओली हैन, ओली प्रवृत्ति हो । व्यक्तिको रूपमा मलाई पनि ओली धेरै मनपर्ने मान्छे हुन् । तर, ओली प्रवृत्ति यतिवेला प्रतिगमन, कुशासन, अल्पविकासको मुख्य वाहक हो ।अग्रगमनको मुख्य वाधक हो । यो एउटा पार्टीको मुद्दा मात्र हैन । कुनैपनि वहानामा यसलाई कॉध थाप्ने गल्ती नगरौं !’